मुन्नी अब लडाकु ! ~ The Nepal Romania
नेपाली मुन्नी रेजिना उप्रेती आइटम डान्समा मात्र खुम्चिन चाहन्नन् । लभरगर्ल र परम्परागत भूमिकामा मुन्नीलाई देख्दै आएका दर्शकहरुले उनलाई अब लडाकु भूमिकामा पाउनेछन् । अघिल्लो शुक्रबार रिलिज भएको 'माटो' देखि अन्तिम पुसको चिसोमा रिलिज हुने 'चिनो'मा रेजिना एक्सन स्टारका रुपमा देखापर्दैछिन् । 'मैले त्यहाँ के गरेकी छैन ? घोडचढी, मास्रल आर्टस्, ग्लाइडर सबथोक गरेँ' मेरोसिनेमासँग रेजिना भन्छिन् 'नौ वर्षको फिल्मी करियरमा पहिलोपटक यति मिहेनतले कुनै चलचित्र गरेकी छु ।'मास्रल आर्टसमा आधारित एक्सनका जोशिला दृश्यहरु रेजिनाले दिएकी छिन् । संयोग के हो भने शोभित बस्नेत निर्देशित चलचित्र 'दुर्गा'बाटै उनले आफूलाई एक्सन भूमिकामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । यतिबेला पनि बस्नेतले नै निर्देशन गरेको रिमेक प्रोजेक्ट 'चिनो'मा उनी एक्सन स्टारका रुपमा छिन् । कथालाई नै लिड गराउने पात्रका रुपमा रेजिनालाई अघि सारेका छन् निर्देशकले । जसका लागि रेजिनाले चार महिना मास्रल आर्ट्सको तालिम नै लिएकी थिइन् । सुटिङका क्रममा मर्किएको उनको खुट्टा रिलिज हुने बेलासम्म निको भैसकेको छैन ।
अपकमिङ अर्को प्रोजेक्ट 'बद्री'मा पनि मुन्नी लडाकु भूमिकामा त छिन् तर 'चिनो'जस्तो लाउड भने होइन । 'यो मेरो रिएल र ड्रीम क्यारेक्टर हो' टेलिचलचित्रकी जुनकिरी भन्छिन् 'यो रोलले मेरो अभिनयमा निखारता ल्याएको महसुस गरेकी छु ।' जेहोस् आइटम डान्सबाट घट्दो तापमानलाई तताएकी नेपाली मुन्नीले एक्सन रोलबाट कस्तो रिभ्यू बटुल्छिन् । पुस ३० गते नै कुर्नुपर्ला ।